June 13, 2019 - Pissaya News
ဒီလို⁠လေး⁠ခေါင်း⁠လျှော်⁠ပြီး ဆံသား⁠လေး⁠တွေကို ဂရုစိုက်⁠ကြမယ်
ပျိုမေတို့ ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါ ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါ ဦးရေပြားကို လက်သည်းနဲ့ အရမ်းမကုပ်မိပါစေနဲ့ ခပ်ဖွဖွလေးသာ ကုပ်ပေးပါ။ အဲ့ဒီလိုကုပ်မိတဲ့ အခါ လက်သည်းမှတဆင့် ဦးရေပြားအတွင်းသို့ ပိုးဝင်နိုင်တဲ့အတွက် အထူးဂရုပြုစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Conditioner သို့မဟုတ် Hair Treatment သုံးတဲ့အခါ Conditioner သို့မဟုတ် Hair Treatment သုံးတဲ့အခါ ဦးရေပြားကို မထိပဲ လက်တစ်လုံးခန့်ခွါပြီး လိမ်းပေးပါ။ ပြီး လျှင် ရေနွေးနွေးနှင့် စိမ်ထားသော မျက်နှာသုတ်ပုဝါဖြင့် ပေါင်းဆေးလိမ်းထားသော ခေါင်းကို ၅မိနစ်ခန့် ပတ်ထား ပေးပါ. ပြီးလျှင် ခေါင်းကို ရေစင်စင်ဆေးချပါ. အဲ့ဒီလို ပြုလုပ်ဖို့ အချိန်လေးပိုပေးရခြင်းအားဖြင့် ပျိုမေတို့ရဲ့ ဆံကေ သာဟာ ပုံမှန်ထက် ၂ဆ ပိုမိုပျော့ပျောင်း စေပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ပြီးလို့ ဆံသားကို ပုဝါဖြင့် သုတ်တဲ့အခါ ခေါင်းလျှော်ပြီးလို့ ဆံသားကို ပုဝါဖြင့် သုတ်တဲ့အခါ မပွတ်ပဲ ခပ်ဖွဖွလေး ဖိသုတ်ပါ. အကြောင်းကတော့ ဆံသားကို ပွတ်တိုက်ပြီးသုတ်တဲ့အခါ ဆံသားအချင်းချင်း ပွတ်တိုက်မိသောကြောင့် ဆံသားများကြွေမွကာ ပျက်စီးတက်ပါတယ် . အဲ့ဒီအချက်လေးကို တော့ အထူးဂရုပြုစေချင်ပါတယ်ရှင်… Hair Coat လိမ်းတဲ့အခါ ခေါင်းလျှော်ပြီး ဆံသား မစိုမခြောက်အနေအထားမှာ Hair Coat လိမ်းပေးပါ. အကြောင်းကတော့ ခေါင်းလျှော် လိုက်တဲ့အခါ ဆံသားအတွင်းပိုင်းမှအညစ်အကြေးများသန့်စင်သွားသည့်အတွက် ဆံသားကွင်းဆက်ကလေးတွေဟာ ဟနေတက်ပါတယ် . ဒီလိုအချိန်မှာ…
နေ့စဉ်တစ်နေ့တာ စတင်ဖြတ်သန်းတိုင်း လူတိုင်းရဲ့မနက်ခင်းလေးမှာ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကတော့ ပါစမြဲပါ။ ကော်ဖီကို လူကြီး ၊ လူငယ်မရွေးသောက်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးရှုထောင့် ကနေကြည့်ရင်တော့ ကော်ဖီက မကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ပြောကြပေမယ့် လည်း ကော်ဖီကိုသောက်ခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ကော်ဖီသောက်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးစေပါတယ်။ အသိညဏ်ပွင့်လင်းမှုကိုတိုးတက်စေပြီး ၊ စိတ်ခံစားမှုကိုလည်းရွှင်လန်းစေနိုင်ပါတယ်။ ခွန်အားစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အသည်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် =================== ကျောဖီနဲ့ကနျြးမာရေး နစေ့ဉျတဈနတေ့ာ စဖွတျသနျးတိုငျး လူတိုငျးရဲ့မနကျခငျးလေးမှာ ကျောဖီတဈခှကျကတော့ မပါစမွဲပါ။ ကျောဖီကို လူကွီး ၊ လူငယျမရှေးသောကျသုံးလရှေိ့ကွပါတယျ။ ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့ ကနကွေညျ့ရငျတော့ ကျောဖီက မကောငျးတဲ့အကြိုးသကျရောကျမှုတှရှေိတယျလို့ပွောကွပမေယျ့ လညျး ကျောဖီကိုသောကျခွငျးဟာ ကောငျးတဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှုတှရှေိစနေိုငျတယျဆိုတာကို ပွနျလညျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။ ကျောဖီသောကျခွငျးကွောငျ့ရရှိလာမယျ့ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးမြား – အိုမငျးရငျ့ရျောခွငျးကိုကာကှယျပေးစပေါတယျ။ – အသိညဏျပှငျ့လငျးမှုကိုတိုးတကျစပွေီး ၊ စိတျခံစားမှုကိုလညျးရှငျလနျးစနေိုငျပါတယျ။ – ခှနျအားစှမျးဆောငျရညျတှကေိုလညျးတိုးတကျစနေိုငျပါတယျ။ – ဆီးခြိုရောဂါဖွဈပှားနိုငျခကြေို လြှော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။ – အသညျးရဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှကေိုတိုးတကျစပေါတယျ။
တစ်ခေတ်တစ်ခါက ကြော်ငြာမင်းသမီးလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ နေမကောင်းလို့ဆေးကုသမှုခံယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာဆိုရင် ဒီကနေ့ မနက်(၆)နာရီက ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒီကနေ့မနက်မှာ ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ရမယ့်ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ သူမရဲ့ပရိတ်သတ်များကို စိတ်မပူကြစေ ဖို့အတွက်လည်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ================== နမေကောငျးလို့ဆေးကုသမှုခံယူနတေဲ့ ထကျထကျမိုးဦး တဈခတျေတဈခါက ကွျောငွာမငျးသမီးလို့ တငျစားချေါဝျေါခဲ့ရတဲ့ ရုပျရှငျဗီဒီယိုသရုပျဆောငျ ထကျထကျမိုးဦးကတော့ နမေကောငျးလို့ဆေးကုသမှုခံယူနတောဖွဈပါတယျ။ သူမဟာဆိုရငျ ဒီကနေ့ မနကျ(၆)နာရီက ခှဲစိတျခနျးဝငျခဲ့တာဖွဈကွောငျးသိရပါတယျ။ ဒီကနမေ့နကျမှာ ခှဲစိတျခနျးဝငျရမယျ့ထကျထကျမိုးဦးကတော့ သူမရဲ့ပရိတျသတျမြားကို စိတျမပူကွစေ ဖို့အတှကျလညျး သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာဖျောပွထားပါတယျ။
လိုင်ယွန်နောက်ခံလူ မန်ဒီ ကို ရီးရဲလ်ခေါ်ယူ
လိုင်ယွန်အသင်းရဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မန်ဒီကို ၆ နှစ်စာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ရီးရဲလ်အသင်းက အတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ရီးရဲလ်အသင်းဟာ မန်ဒီ ကို ပေါင် ၄၉ သန်းနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မန်ဒီအတွက် ရီးရဲလ်အသင်းရဲ့ ကစားသမားအဖြစ် မိတ်ဆက်ပွဲကိုတော့ အခုလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် =================== လိုငျယှနျနောကျခံလူ မနျဒီ ကို ရီးရဲလျချေါယူ ============================ လိုငျယှနျအသငျးရဲ့ ဘယျနောကျခံလူတဈဦးဖွဈတဲ့ မနျဒီကို ၆ နှဈစာခြုပျနဲ့ ချေါယူနိုငျခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး ရီးရဲလျအသငျးက အတညျပွုထုတျပွနျပါတယျ။ ရီးရဲလျအသငျးဟာ မနျဒီ ကို ပေါငျ ၄၉ သနျးနဲ့ ချေါယူနိုငျခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ မနျဒီအတှကျ ရီးရဲလျအသငျးရဲ့ ကစားသမားအဖွဈ မိတျဆကျပှဲကိုတော့ အခုလ ၁၉ ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပပေးသှားမှာဖွဈကွောငျးလညျး သိရပါတယျ။ #Pissaya_Sport
ဂီတမှူးနိုင်ဇော်ရဲ့  သမီးဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂီတမှူးနိုင်ဇော်ဟာ သမီးဖြစ်သူအတွက် ၀မ်းသာဂုဏ်ယူစွာနဲ့ အမှတ်စာရင်းတွေကို FB စာမျက်နှာမှာ တင်ထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ‘’သမီးအတွက်အမှတ်စာရင်းသွားထုတ်ပေးရင်းအမှတ်တွေသိရလို့ထပ်ပျော်နိုင်ပါပြီ’’ဆိုပြီး ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ နိုင်ဇော်ကို အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကလည်း သမီးလေးအတွက် ၀မ်းသာဂုဏ်ယူကြောင်း ပြောထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ Photo Credit – Naing Zaw
အိန္ဒိယမှာ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ၁ ဦးသေ၊ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွမ်ဘိုင်းမြို့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ၁ ဦးသေဆုံးပြီး၊ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သေဆုံးခဲ့သူဟာ အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းကြောင့်လွင့်စင်လာတဲ့ ကွန်ကရစ် ဘုတ်အပိုင်းအစ ထိမှန်ကာ သေဆုံးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ ၃ ဦး ကိုတော့ ဆေးကုသမှုပေးထားပြီး စိုးရိမ်စရာအခြေအနေမှာမရှိဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေမှာဆိုင် ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက် ခတ်လျက်ရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် =================== အိန်ဒိယမှာ ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး တိုကျခတျမှုကွောငျ့ ၁ ဦးသေ၊ ၃ ဦး ဒဏျရာရ ======================================================= အိန်ဒိယနိုငျငံ မှမျဘိုငျးမွို့ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျးဝငျရောကျတိုကျခတျမှုကွောငျ့ ၁ ဦးသဆေုံးပွီး၊ ၃ ဦး ဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ သဆေုံးခဲ့သူဟာ အသကျ ၆၂ နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈပွီး မုနျတိုငျးကွောငျ့လှငျ့စငျလာတဲ့ ကှနျကရဈ ဘုတျအပိုငျးအစ ထိမှနျကာ သဆေုံးခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ မုနျတိုငျးအရှိနျကွောငျ့ ဒဏျရာရရှိခဲ့သူ ၃ ဦး ကိုတော့ ဆေးကုသမှုပေးထားပွီး စိုးရိမျစရာအခွအေနမှောမရှိဘူးလို့လညျး သိရပါတယျ။ လကျရှိအခွအေနမှော အိန်ဒိယနိုငျငံ အနောကျဘကျကမျးခွမှောဆိုငျ ကလုနျးမုနျတိုငျးတိုကျ ခတျလကျြရှိနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ #Pissaya_International News
အဝတ်အစား ဝတ်ဆင်ရာမှာ မပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်(၃)ချက်
ပရိသတ်တွေကို ရင်ထဲ အသဲထဲကကျေးဇူးတင်တဲ့လို့ ပြောလာတဲ့ စိုင်းစိုင်း